I-Playwatch, umagazini ovusa inkanuko exuba i-Playboy ne-Overwatch, uyavala | Izindaba zamagajethi
I-Playwatch, umagazini ovusa inkanuko exuba i-Playboy ne-Overwatch, uyavalwa
Akukona okokuqala ukuthi sihlanganise inkanuko ne-Overwatch, umdlalo odumile weBlizzard ube yimpumelelo kumawebhusayithi afana PornHub. Kodwa-ke, kubonakala sengathi iBlizzard, unjiniyela walo mdlalo wevidiyo esibhekisa kuwo, akenzi ukuthi isihloko sihlekise njengathi. I-Playwatch yazalwa esikhathini esedlule, umagazini ovusa inkanuko owalingisa ngokweqile i-Overwatch ne-Playboy eyinsumansumaneKodwa-ke, iBlizzard isho okwanele futhi iphoqelele ukuvala lo magazini osubalulwe ngenhla, ochithwe njengento eyinqaba kanye nempikiswano.
I-Playwatch yazalwa njengesembozo ngaphandle kokuningi, zadalwa nguManusogi futhi zashicilelwa ku-DevianArt, kepha-ke, umphakathi wawuthanda kakhulu kangangokuba iwebhusayithi U-Overpog waqala ukusebenzisa lezi zimbozo ukukhombisa izindatshana ezibhekisa kubalingiswa begeyimu yevidiyo ngokuqukethwe okwenziwe abalandeli uqobo lwabo nokuthi iningi labo lalinezithombe ezinqunu zabalingiswa abashiwo ngenhla. Kepha leli phupho alihlalanga isikhathi eside ngokwanele, i-Playwatch iyavalwa ngemuva nje kokushiya isitatimende kuwebhusayithi yayo.
Siqale ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngenhloso yokunikeza abalandeli be-Overwatch indlela entsha yokujabulela umdlalo nokwakha indawo lapho abaculi nababhali bengabelana ngomsebenzi wabo nomphakathi. Ithimba lonke le-Playwatch lifuna ukunibonga ngoxhaso lwenu. Kube yintokozo ukuhlangana nani nonke futhi sibheke phambili ekunikezeni izindaba ngekusasa lokushicilelwa ngokushesha lapho sesinakho.
Amandla enkampani enkulu efana neBlizzard awe kule ncwajana encane, nayo enziwe ngabalandeli futhi engenayo nencane inzuzo. Impela, izithombe zocansi namavidiyo wevidiyo zinobudlelwano obusondelene kakhulu muva njefuthi izinkampani zifuna ukusetha imikhawulo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ezocansi nezocansi » I-Playwatch, umagazini ovusa inkanuko exuba i-Playboy ne-Overwatch, uyavalwa
A Windows 10 PC usayizi wedrayivu yepeni? I-Smartee Windows On Stick [BUYEKEZA]
UDonald Trump wenqaba ukushiya i-Samsung Galaxy S3 yakhe